कुलमान घिसिङको तलब सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ! – Dainik Sangalo
कुलमान घिसिङको तलब सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: १६:०९:३८
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान सिघिङको दोश्रो इनिङ सुरु भएको छ । पहिलो कार्यकालमा कमाल गरेका कुलमानले खाने तलब र सेवासुविधाबारे चासो हुने गरेको छ । सरकारले चौतर्फी प्रसंसा बटुलेका घिसिङलाई ४ बर्षका लागि दोश्रो पटक प्राधिकरणको जिम्मा लगाएको हो ।
जनताको चर्को दवाव, सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा उनलाई पुनः प्राधिकरणमा ल्याइएको हो । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नियुक्ती गर्न आनाकानी गरेको थियो ।
उनले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अघि बढाएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइने बताए । प्राधिकरणका कुनै काम गलत बाटोमा गएको भए सच्याउने भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘कसैको विरोध गर्ने भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिन्छौं । अनलाइन मनर्गबाट
Last Updated on: August 16th, 2021 at 4:09 pm